Tag: fitantanana ny mailaka | Martech Zone
Tag: fitantanana ny fisoratana anarana amin'ny mailaka
Tamin'ity herinandro ity aho dia nihaona tamin'ny orinasa iray izay mieritreritra ny handao ny mpanome tolotra mailaka azy ireo ary hanangana ny rafitry ny mailaka ao anatiny. Raha nanontany ahy ianao folo taona lasa izay raha hevitra tsara izany dia nilaza aho fa tsia. Na izany aza, niova ny fotoana, ary ny teknolojia an'ny ESP dia mora ampiharina raha fantatrao izay ataonao. Izany no antony namolavolantsika CircuPress. Inona no niova tamin'ny mpanome tolotra mailaka? Ny fiovana lehibe indrindra amin'ny